China mpitrandraka etona haingam-pandeha ho an'ny fampangatsiahana indostrialy / fizotra mangatsiaka mangatsiaka / mpanamboatra sy mpamatsy rafitra HAVC | Yubing
Ny condenser evaporative an'ny ZICE dia karazana fitaovana fifanakalozana hafanana mahery vaika nohavaozina sy novolavolaina tamin'ny fahazoana ny haitao fandrindrana hafanana mandroso indrindra manerantany.
Ny condenser etona dia mampiasa rano sy rivotra ho mpanelanelana izay manova ny entona mangatsiaka avy amin'ny etona ka hatrany amin'ny fanjakana misy rano. Ny etona halefitra dia mivezivezy amin'ny coil condensing, izay mando eo ivelany hatrany amin'ny alàlan'ny rafi-drano miverimberina. Ny rivotra dia tsofina miakatra ambony amin'ny coil, ka mahatonga ny ampahany kely amin'ilay rano niely indray lasa etona. Io evaporation io dia manala ny hafanana avy ao anaty coil, mampihena sy mampihena ny etona ao anaty coil.
Ireo milina ireo dia mety indrindra amin'ny fampangatsiahana indostrialy sy ny fizotran'ny rojo mangatsiaka, hiantohana ny fahamendrehana, ny fahombiazana avo lenta ary ny vidin'ny fandidiana ambany. Ireo condenser ao ZICE dia manana tombony manaraka:
Famolavolana mora ho an'ny MaintfNantoka:
Ny varavarana fidirana be loatra dia manome fidirana mora mankany amin'ny atitany ho an'ny fizahana sy fikojakojana isan'andro.
Fanaraha-maso sy fikojakojana tsy misy fiatoana:
Ny sivana akoho baolina sy tavy dia azo zahana sy amboarina nefa tsy atsahatra ny fiasan'ny fitaovana. Noho ny fikorianan'ny rivotra sy ny rano amin'ny làlan-kaleha, dia afaka mandinika sy manamboatra ireo nozera sy coil mandritra ny fizotrany.
Fampisehoana rafitra avo indrindra amin'ny vidin'ny asa ambany indrindra:
Ny teknolojia mikoriana mitambatra dia mampitombo ny fahombiazany: ny rafitra ambany mampihena ny mari-pana amin'izany dia mampihena ny herin'aratra ho an'ny compressor, mitahiry angovo hatramin'ny 15% raha ampitahaina amin'ireo rafitra nentin'ny rivotra nentin'ny rivotra.
Safidy mahomby amin'ny fampiharana lehibe:
Ny vidin'ny fananana farany ambany indrindra, ny vidin'ny fametrahana ambany indrindra, ary ny fomba tsara indrindra hanamafisana ny habaka amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny condenser nentim-paharazana, ny tilikambo fanamafisana, ny paompin-drano mivezivezy, ny basin ary ny fantsona mifandray.
Ny condenser evaporative ZICE dia manome fahombiazana mahomby amin'ny singa iray mora hitazonana noho ny teknolojia patanty mampihena ny vidin'ny vata fampangatsiahana, ny fifandraisana ary ny lanjan'ny fitaovana, manalavitra ny risika amin'ny ambaratonga fa mandritra izany fotoana izany dia nitombo ny fahazoana mikojakoja, manalefaka ary azo ampiasaina amin'ny fametrahana ary izany no niantsoana azy hoe maodely ambony indrindra
Previous: ICE MBR Membrane Module momba ny fitsaboana rano maloto amin'ny indostrialy ho an'ny rafitra Tower Cooling
Conditioner etona amoniaka
Rojo mangatsiaka condenser evaporative
Fitehirizana mangatsiaka Condenser evaporative.
Mpanamboatra Condenser evaporative
Vata fampangatsiahana condenser evaporative
Conditioner etona amoniaka indostrialy